“बायोमेट्रिकले नक्कली फ्‌याकल्टीको समस्या हटाउँछ”
अन्तर्वार्ता/विचारबुधबार, ९ फाल्गुण , २०७४
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा भन्छन्, “६ महीनापछि नेपालमा कार्यरत सबै डाक्टरको बायोमेट्रिक लिने तयारी भइरहेको छ।”
मेडिकल काउन्सिलले कलेजमा कार्यरत फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) हरूको बायोमेट्रिक लिनुको कारण के हो ?
मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएस र विशेषज्ञ तहमा विद्यार्थी पढाउने प्रमुख आधार फ्याकल्टी हुन् । उनीहरू योग्य र सक्षम भएनन् भने विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाउँदैनन् ।
अधिकांश कलेजमा नक्कली फ्याकल्टीको समस्या पहिलेदेखि नै देखिएको हो । त्यसैले नक्कली फ्याकल्टीको समस्या हटाउन बायोमेट्रिकमार्फत रेकर्ड राख्न थालिएको हो ।
बायोमेट्रिक कसरी लिंदै हुनुहुन्छ ?
पहिलो चरणमा कलेजहरूले दाबी गरेका फ्याकल्टीहरूको नाम, काउन्सिल दर्ता नम्बर र औंठाछाप लिन्छौं । कलेजबाट प्राप्त बायोमेट्रिकको विवरण अनुसार फ्याकल्टीहरूको सूची तयार पार्छौं र कलेजलाई पुनः फ्याकल्टीको आधिकारिकताबारे सोध्छौं ।
अन्त्यमा वेबसाइटमार्फत सूची प्रकाशन गर्छौ । कलेजको सीट निर्धारणका लागि हुने अनुगमनका बेला तिनै फ्याकल्टी कार्यरत भए/नभएको बारे भेरिफाई गर्छौं ।
कलेजले अनुगमनभन्दा पहिले काउन्सिललाई ‘सेल्फ अप्राइजल रिपोर्ट’ मार्फत कार्यरत फ्याकल्टीको विवरण पठाउँछ । त्यही विवरणलाई आधार मानेर अहिले बायोमेट्रिक लिने काम भइरहेको छ । प्रत्येक कलेजमा काउन्सिलबाट दुईदेखि तीन सदस्यीय टोली खटेको छ । उनीहरू बायोमेट्रिकको डिभाइस लिएर कलेजहरूमा पुगेका छन् । अहिले करीब १२ वटा मेडिकल कलेजमा कार्यरत फ्याकल्टीहरूको बायोमेट्रिक लिने काम सकिएको छ ।
बायोमेट्रिक लिंदैमा नक्कली फ्याकल्टीको समस्या हट्छ भन्ने आधार के छ ?
बायोमेट्रिकमा फ्याकल्टीहरूको हस्ताक्षर र अन्य व्यक्तिगत विवरण लिइएको हुन्छ । यसपछि कलेज अनुगमन गर्न जाँदा बायोमेट्रिकअन्तर्गत दर्ता भएका फ्याकल्टीको भेरिफिकेसन गरिन्छ । बायोमेट्रिकका क्रममा कलेजले जुन फ्याकल्टी दाबी गरेको हो, अनुगमनका बेला तिनै फ्याकल्टी हुनुपर्छ । अन्यथा हामीले उनीहरूलाई फ्याकल्टी मान्दैनौं ।
बायोमेट्रिक लिने क्रममा नक्कली फ्याकल्टी भेटिएका छन् ?
कतिपयले फ्याकल्टीका रुपमा दुई वटा कलेजमा काम गरिरहेको भेटिएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू फ्याकल्टी मानिंदैन ।
फ्‌याकल्टी बाहेकका डाक्टरहरूलाई चाहिं बायोमेट्रिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्दैन ?
आगामी ६ महीनाभित्र सबै डाक्टरको अनिवार्य बायोमेट्रिक लिने योजना छ ।